Runlọ ọrụ Crunchbase maka Salesforce: Chọpụta, Bubata, ma mekọrịta B2B Atụmatụ Data | Martech Zone
Crunchbase Enterprise for Salesforce: Chọpụta, Bubata na Mekọrịta B2B Prospect Data
Fraịde, Ọgọstụ 28, 2020 Fraịde, Ọgọstụ 28, 2020 Douglas Karr
Ndị ụlọ ọrụ n'ụwa nile na-akwụ ụgwọ Crunchbase data iji mee ka ebe nchekwa data azụmahịa ha baa ọgaranya, hụ na ịdị ọcha data dị mma, ma nye ndị otu ahịa ha ohere ịnweta ozi ụlọ ọrụ ha chọrọ iji hụta ohere.
Crunchbase amalitela ọhụrụ Mgbakwunye ahịa maka ndị ọrụ Crunchbase niile nke ahụ ga - enyere ndị mmadụ na obere ndị otu ahịa ngwa ngwa ịchọpụta ma rụọ ọrụ na atụmanya dị elu.
Mmelite a na-abịa n'oge oge dị oke egwu maka ndị na - ere ahịa - ya 80% nke ụlọ ọrụ ifịk ifịk ịgagharị ụzọ ịgbanwee ha-aga-ahịa azum n'ebe dijitalụ, na na 32% nke ndị na-eme mkpebi na-ekwu na o yikarịrị ka mgbanwe ndị metụtara ọrịa na-efe efe na-eru nso ebe a.
Site na njikọ a, ndị ọrụ Crunchbase agaghịzi eji oge dị oke ọnụ jiri aka na-ebupụ atụmanya sitere na Crunchbase gaa na CRM ha. Ntughari nke Salesforce maka Crunchbase Enterprise na-enye gi ohere ime ka akuko ohuru na Salesforce di ugbu a na Crunchbase's firmographic & wide data data (nke ahu bu 40 + data).
Crunchbase na Ahịa Salesforce
Gaa na nyocha iji gbasaa na ntinye ole na ole: Crunchbase nyocha nzacha, jikọtara ya na ọhụụ ọhụụ ụlọ ọrụ ọhụrụ kwe ka ndị ọrụ mụta banyere otu ụlọ ọrụ, chọpụta atụmanya, ma chekwaa ha ozugbo na Salesforce.
Lekwasị anya n'ire, ọ bụghị ntinye data: Hụ olile anya dị na Salesforce ma zere mbiputegharị ndekọ. Mgbe ndị ọrụ chọtara ma chekwaa atụmanya ọhụụ site na Crunchbase ruo Salesforce, a na-echekwa ozi ụlọ ọrụ dị mkpa iji hazie mgbasa ozi.
Inwe atụmanya ha na-azọpụta: Site na asọmpi dị egwu n'etiti ndị na-ere ahịa, ihe ịma aka mbụ na-abụkarị inweta atụmanya. Atụmanya ọ bụla onye ọrụ na-azọpụta na Crunchbase ruo Salesforce ga-adị n’aha ha.
Ndị na-ere ahịa na-agba mbọ ịchọta ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa n'oge ọdịda akụ na ụba a. Ha na etinye oge dị oke ọnụ oge na-achọ ma tozuo ndu ọhụụ, ogologo oge tupu ha eziga ọbụna ozi izizi izizi. Ntughari ohuru ohuru nke Salesforce na eme ka usoro olile anya ahu di ngwa site na ijiko oru ndi nlere anya nke Crunchbase na ebe nchekwa data nke ulo oru ya na ndi oru ahia. Ugbu a, ndị na - ere ahịa nwere ike mekọrịta akaụntụ ọhụrụ ngwa ngwa ha chọpụtara na Crunchbase ozugbo na CRM ha. Na, ọ dị mfe ịhụ nke akaụntụ Crunchbase na-efu na ihe atụ nke Salesforce ha, yabụ ha nwere ike ịchọpụta ihe ndekọ na ọ nweghị onye otu ha na-azọrọ.
Arman Javaharian, Isi nke Ngwaahịa Crunchbase
Crunchbase malitekwara n'oge na-adịbeghị anya mezue mmezigharị na profaịlụ ụlọ ọrụ na ntanye na-enyocha ihe ngosi data na-enyere ndị na-ere ahịa aka ngwa ngwa:
Ghọta ihe otu ụlọ ọrụ na-eme na ogo ogo ha.
Nyochaa arụmọrụ nke ụlọ ọrụ site na iji ozi gbasara ego gụnyere ego zuru oke na nnweta.
Gwuo n'ime nkọwa iji kpebie ma ụlọ ọrụ ọ dabara na mkpa ha site na ozi miri emi na teknụzụ nke ụlọ ọrụ, atụmatụ ego ha ga-enweta, ndị mmadụ, na akara ngosi.
Mụtakwuo maka Crunchbase maka Enterprise
Ngọnarị: Douglas bụ ngalaba-onye guzobere ya Highbridgenwere Onye ahia ahia